တစ်စုံတစ်ယောက်အော်သံ! အခုတော့ သာ. လုပ်! (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 21 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
တစ်စုံတစ်ယောက်အော်သံ! အခုတော့ သာ. လုပ်! (ထုတ်လုပ်)
ဆာပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ကျေးဇူးပြုပြီး ... ကျနော်တို့မင်းသမီးအမှန်တကယ်ဒီညနေချင်! (ထုတ်လုပ်)